Gị n'ọrụ nwere Nledo Na At Na Work? - OMG Ngwọta
Nlele nke Ndị Ọrụ na Ọrụ:
N'oge ugbu a, ọ nwere ike bụrụ na onye were gị n'ọrụ ma ọ bụ onye ahịa gị na-echedo gị igwefoto zoro ezo ma ọ bụ GPS Trackers ma ọ bụ tekọ olu. Teknụzụ ọhụụ emeela ka ọ dịkwuo mfe ilekwasị ndị ọrụ anya site na igwefoto zoro ezo ma ọ bụ Ndekọ olu ma ọ bụ Ihe nlere GPS. Ndị were gị n'ọrụ nwere ike ịbanye na ndị ọrụ site na usoro dị iche iche - mana ọ ga - eme nke a site na ụzọ enwere ntụkwasị obi yana ọtụtụ ihe iwu chọrọ.
Ọtụtụ ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ ga-ahọrọkwa ilele ekwentị na sistemụ sistemụ IT site na ndị ọrụ ha, na mpaghara ụfọdụ, ndị were ọrụ ga-ejikwa nsuso ụgbọ na CCTV na usoro ndị ọzọ iji nyochaa ngwa / ngwaahịa / ebe ha. N'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya na igwe onyonyo zoro ezo, GPS Trackers, na Ndekọ olu.
Dika teknụzụ na-aga n’ihu, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-aga n’ihu dị ka ịtinye ndị ọrụ ha na teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke igwefoto zoro ezo, GPS Trackers na Voice Recorder. Maka ngwaọrụ ọhụụ anyị gara na webụsaịtị anyị.
Ihe kpatara onyunyo nke ndị ọrụ ji:
Ndị were ọrụ nwere ike ịhọrọ idobe ndị ọrụ maka ihe ebumnuche ndị a:
Iji kpuchido ndị ọrụ ha ma ọ bụ ndị otu, dịka ọmụmaatụ, ihe gbasara ahụike na nchekwa, gbochie ime ihe ike na ịpụnara ngwongwo, iji na-enwe ọzụzụ na ọfịs na ebe azụmahịa ndị ọzọ.
Iji lelee akparamagwa, mmejọ, ma ọ bụ izu ohi, ma ọ bụ wayo nke ọgụgụ isi na azụmaahịa azụmahịa, nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị otu na-ejikwa ma hụ na anaghị emebi iwu nke ụlọ ọrụ.
Iji kpuchido uru azụmahịa.
Iji gbaa mbọ hụ na ọrụ ndị ahịa dị mma (nke nwekwara ike ịkọwa mkpa ọzụzụ maka ndị ọrụ ha) ma lelee ma melite arụpụta ihe. Iji jide n'aka na a na-edozi mkpesa nke ndị ahịa.
Irube isi na ntinye iwu na nhazi nke ndi kwesiri ya, ma kee ndi oru a ka ha soro iwu na usoro nke ulo oru a.
Iji hụ na nkwukọrịta dịka ọmụmaatụ ozi ịntanetị, ojiji ịntanetị, na oku ekwentị bụ naanị maka azụmahịa ahụ.
Nnukwu ụlọ ọrụ na-ewe mmadụ n'ọrụ ga-enwe Nkwupụta Ọchịchị Social Media nke nwere ike ịgụnye ileba anya na ojiji nke ndị ọrụ na-eji weebụsaịtị ịkparịta ụka n'websitesntanet (n'otu ibe mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ nke onwe ya ma ọ bụ na ibe mgbasa ozi nke onye ọrụ). Ọtụtụ ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ ga-enwe IT na Nkwukọrịta Nkwukọrịta iji kọwaa etu ndị ọrụ ga-esi jiri sistemụ ha (nke nwere ike ịgụnye ojiji nke mbadamba ihe na mobiles na ụkpụrụ nke Onye-Nweonwe). Anyị nwere ngwaahịa dị elu maka ikpuchi maka nkọwa ndị ọzọ pịa ebe a.
Iwu nke United Kingdom gbasara onyunyo:
Iwu nke United Kingdom banyere onyunyo gụnyere:
Iwu Iwu nke Ike Nchoputa 2000 (RIPA) na 2016
Iwu Usoro Nkwukọrịta 2000 (Iwu Azụmaahịa Iwu)
Iwu Iwu Nchedo 2018 na Usoro Nchedo Data 2018 - Ndị were n'ọrụ ga-eme ihe na-eso GDPR yana DPA yana ụkpụrụ isi isii ya.
Ihe iwu kwesiri ntukwasi obi nke ntukwasiobi na ntụkwasị obi na ntinye n’etiti onye were oru na onye oru nwekwara ya - Ndi n’enye oru aghaghi ime ihe n’ejighi ezi na odi mma, n’ụzọ puru imebi ma obu mebi mmekorita nke ntụkwasị obi na ntụkwasị obi n’etiti onwe ha na nke ha ndị ọrụ.
Agbanyeghị, Iwu Ihe Ndị Ruuru Mmadụ 1998 na-ekerekwa òkè dị mkpa ebe a ka ọ na-enye ndị mmadụ ikike nzuzo na iwu United Kingdom na-agba mbọ ịchọpụta na ndị ọrụ nwere ike iche na nlele nke onye were ha n'ọrụ na-agbagha.
Yabụ, ndị were ọrụ chọrọ ịchọta nguzozi n'etiti atụmanya ziri ezi nke onye ọrụ na nzuzo na ndị na-ahụ maka ndị ọrụ mgbe ha na-elele ndị ọrụ ha, n'ụzọ ọ bụla; ekwesiri inwe ezi nguzo maka nleba anya.
Maka mkpa nguzo a siri di, iwu United Kingdom nke ugbu a di iche n’etiti:
Ilebara anya (otu onye) na nlele usoro (ebe a na-ahụkarị ndị ọrụ ma ọ bụ ìgwè ndị ọrụ n'otu aka ahụ)
Mepee ma chekwaa
Nleba anya nke nkwukọrịta ndị enwetabeghị na nlele ma ọ bụ igbupụ nkwukọrịta kọmputa na - anaghị enweta (dịka ịntanetị, faksị, na oku ekwentị). 'Ihe mgbochi' na - eme mgbe e mere ka ọdịnaya nke nkwukọrịta ahụ nweta onye na-abụghị onye zitere ya ma ọ bụ onye zitere ya. Onye zitere ya na onye natara nkwukọrịta ahụ kwesịrị ịnabata nnabata nke ihe a ka ọ bụrụ iwu. 'Usoro nke ntughari' bu iwu di elu nke iwu RIPA na LBP (nke di n'elu).
Typesdị ụdị onyunyo a niile nwere ike ịbụ ihe ziri ezi.
Yabụ mgbe ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ guzobere sistemụ nyocha ha, ha ga-eme (iji jide n'aka na nleba anya bụ iwu)
Mee nyocha 'mmetụta' iji gosipụta ihe ojiji nke Igwefoto Zoro Ezo / GPS Trackers / Voice Recorder / monitoring - nke na-egosipụta ihe kpatara nyocha na uru nwere ike ịpụta na mmetụta na-adịghị mma; lee uzo ozo nke eji emezu nzube a; lee ihe achọrọ anya site na nlekota eg na-agwa ndị ọrụ, ijikwa data, arịrịọ nnweta isiokwu (SAR) site n'aka ndị ọrụ; ma mkpebi ahụ ọ bụ nke ezi uche dị na ya (ma e jiri ya tụnyere mmetụta ọjọọ ndị ọrụ ahụ nwere ike ịnweta)
Gwa ndị ọrụ ihe kpatara ya, oke, yana ụdị nleba anya nwere ike ime. Ndị ọrụ anaghị agbadata ikike nzuzo nke onwe ha mgbe ha na-agafe n'ọnụ ụzọ ndị were ha n'ọrụ na nke a ga-abụrịghị ndị na-ahụ maka ọrụ ha na-eme iji hụ na ndị ọrụ ha anaghị etinye aka na agwa ọjọọ.
Gbaa mbọ hụ na onyunyo metụtara azụmahịa yana akụrụngwa a na-elele bụ nke enyere ma ọ bụ zuo ezu maka ọrụ
Mee ka o doo anya na ihe nzuzo dịịrị onye ọrụ ga-eche ma ọ bụ enweghị ike iche n'echiche mgbe ọ na-eji sistemu nke onye were ha n'ọrụ ka ya na ndị ọzọ na-ekwurịta okwu, yana mgbe ọ na-eji ụlọ mposi ma ọ bụ na-ezumike ebe a na-eche nche.
Nye ha akara ekwentị a na-anaghị edozighi ahazi maka ndị ọrụ ka ha jiri ihe mberede ma ọ bụrụ na-edekọ / na-enyochakarị ekwentị niile.
Mara nke ọma na onye ọrụ ahụ maka ojiji nke onwe ya na ihe na-abụghị
Nye ihe ndekọ ederede banyere ederede banyere onyunyo
Kọwaa ka onye isi ahụ ga-esi jiri ozi a nwetara site n’ileru anya. Onye ọrụ nwere ike ịmara na Zoro Ezo Zoro Ezo, GPS Trackers, Olu A na-edekọ ụda dị ka ihe atụ, mana nke a agaghị akwado Onye were n'ọrụ iji igwefoto zoro ezo, GPS Tracker, na Ndekọ olu na usoro inye ọzụzụ ma ọ bụrụ na a gwaghị onye ọrụ ahụ ka ọdee vidiyo ahụ. enwere ike iji ya maka ebumnuche ahụ. Dịka ọmụmaatụ - onye ọrụ nwere ikike ịnwe igwefoto zoro ezo, GPS Tracker, a ga-eji ihe ndekọ olu maka ebumnuche nchekwa belụsọ na agwara ya ihe ọzọ.
Gbaa mbọ hụ na ndị etinye aka na nyocha a maara ọrụ dịịrị ha
Kọwaa otu a ga-esi chekwaa ma hazie ozi a na-eso GDPR yana Iwu Nchedo Data, yana onye nwere ohere ịnweta ozi a
Hapụ ndị ọrụ ka ha kwuo ihe egwu ọ bụla ha nwere, na ntụkwasị obi, ma hụ na enyere ha ohere ịkọwa ma ọ bụ ịma aka ndekọ vidiyo ọ bụla ejiri dị ka akụkụ nke usoro ọzụzụ.
Ezubere iche maka onyunyo:
Ọtụtụ mgbe, onye were ya n'ọrụ ga-eme naanị ka o doo anya na usoro ọ bụla, belụsọ ezubere iche na / ma ọ bụ nleba anya nzuzo nwere ezi uche.
Ichebe / zoro ezo nzuzo ga-abụ naanị ihe ezi uche dị na ya n'ọnọdụ pụrụ iche, ebe enwere ihe achọrọ iji chee arụrụ ọrụ mpụ ma ọ bụ omume na-enweghị ọrụ ọ bụla nke onye ọrụ chọrọ na nlebara anya dị oke mkpa ịkwụsị ma ọ bụ ịchọpụta mpụ a ma ọ bụ imebi iwu a, ebe ọ nweghị ụzọ ọzọ nwere ezi uche. .
Ekwesịrị itinye ụdị nlezianya a n'ime oge a kara aka yana dịka akụkụ nke nyocha a kapịrị ọnụ na a na-eche na iyi egwu nke nkwụsị ndị ọrụ 'adịghị njọ', dịka nlele onyunyo aghaghi ịgbado anya na mmetụta na mmadụ ole na ole o kwere mee. Ekwesịrị ikwupụta ụdị nyocha a ka ọ bụrụ ihe dị mma na nchekwa data nke ndị were ọrụ ma ọ bụ iwu nzuzo. Inyocha onyunyo a ga - edite na nti ịdọ aka na ntị ebe onye were gị n'ọrụ chere na onye ọrụ ahụ agabigala ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ihe nlele a ezubere iche na-enye ozi n'amaghị ama maka arụrụala ndị ọrụ ndị ọzọ mere, ekwesighi iji ihe aka a megide ndị otu ndị ọrụ belụsọ ma ọ bụrụ na ọ bụ mkpesa ọjọọ. N'ebe omume ọjọọ dị obere, iji ihe ndekọ vidiyo 'zoro ezo' dọọ onye ọrụ aka ọrụ, a gaghị ahapụkarị ya.
Ozi nkeonwe anakọtara site na nchedo agha ga-abụrịrị ebumnuche ziri ezi yana enweghị ike iji ya maka nzube ọ bụla karịa ka eburu n'uche.
Oge ilele ndị ọrụ si n’ebe ọrụ nwekwara ike adabara ma ọ bụrụ na onye were gị n’ọrụ nwere ike igosipụta na ọ nwere ezi uche (ha nwere ezi ihe kpatara ha na-atụ aro ka onye ọrụ tinye aka n’omume ọjọọ ma ọ bụ na-emebi iwu ụlọ ọrụ) na nha anya (onye were ọrụ ahụ agawaghị. karịa dị mkpa na ojiji.
N'ụzọ bụ isi, ihe ọ bụla onye na-ahụ maka ọrụ na-eme nyocha ga-dabere na nchegbu nke onye were ya n'ọrụ chọrọ ime ihe.
Na Mee 25, 2018, mgbe GDPR ghọrọ iwu, Commissionerlọ Ọrụ Kọmịshọna Ekwenyewo na nlekota nzuzo nke ndị ọrụ nwere ike ịbụ ihe ziri ezi na ọnọdụ ndị ama ama mgbe imelite onye ọrụ metụtara ya ga-akpọ asị ma ọ bụ ịchọpụta mpụ. Ndị were n'ọrụ nwere ike ịdabere na ngwaọrụ dị elu anyị maka nlekọta ndị ọrụ, Pịa ebe a maka nkọwa ndị ọzọ.
Ọmụmụ nke Ikpe:
Community Gateway Association megide Atkinson, na ikpe 2014, Nnwale Mkpegharị Ọrụ na-ekwu na onye were gị n'ọrụ na-achọpụta ozi ịntanetị nke onye ọrụ, ka ọ na-eme nyocha ntaramahụhụ maka omume onye ọrụ, abaghị uru na-etinye aka na ndụ ndị ọrụ - onye ọrụ ahụ enweghị olile anya ezi uche dị na nzuzo na ọnọdụ ebe ọ zigara ozi ịntanetị site na akaụntụ ọrụ ya na-emebi iwu e-mail (nke ọ depụtara ma na-aza ajụjụ maka ịmanye!) na ozi ịntanetị ahụ akaraghị 'nke onwe / nkeonwe '
Eziokwu ahụ bụ na Maazị Atkinson ejirila sistemụ email mebie iwu email nke Association ahụ, achọpụtara n'ihi nsonaazụ nyocha ya gbasara omume ya. Ndị were gị n'ọrụ ga-ekwenye na ndị ọrụ nwere ike ịnwe olile anya ezi uche dị na nzuzo na ọrụ ma ọ bụrụ na onye isi enweghị akwụkwọ iwu 'Email na Internet (ma ọ bụ nke yiri ya) nke ndị ọrụ niile mara.
N'oge 2018, mkpebi ikpe abụọ dị mkpa sitere n'aka Courtlọikpe Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Europe (ECHR):
In Montenegro na Antovic na Mirkovic, ECHR kpebiri na ọ bụ mmebi ikike nzuzo prọfesọ abụọ n'okpuru iwu ndị ruuru mmadụ, ịwụnye igwefoto na-ahụ maka ihe omume n'ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ (maka ihe a kwuru maka ichebe ihe onwunwe na ndị mmadụ ma lelee nkuzi). ECHR kwuru na 'ndụ onwe onye' nwere ike ịnwe mmemme ndị ọkachamara na-eme na mpaghara ọha na eze (ụlọ nzukọ), na onye were ya n'ọrụ enweghị ezigbo ihe kpatara nyocha ahụ ebe enweghị ihe akaebe na-egosi na ihe onwunwe ma ọ bụ ndị mmadụ nọ n'ihe ize ndụ.
Na Spanish okwu nke Lopez Ribalda na ndị ọzọ na Spain, ECHR chọpụtara na ojiji nke igwefoto vidiyo zoro ezo na nnukwu ụlọ ahịa iji lelee ohi ndị ohi enwetara site n'aka ndị ọrụ mebiri ikike nzuzo ha n'okpuru Isiokwu 8 nke European rights of Human rights.
Na 2009, mgbe ọ hụrụ ọgbaghara dị n'etiti ọkwa ngwaahịa na ire ahịa nke ruru 20,000 € n'ime ọtụtụ ọnwa, nnukwu ụlọ ahịa ahụ, yana igwefoto CCTV a na-ahụ anya, awụnyere igwefoto zoro ezo n'azụ tebụl ndị ahịa ha na ụlọ ahịa ahụ. Ndị ọrụ ise kwụsịrị ọrụ ha mechara ka kamera onyunyo ahụ hụrụ na ha na-ezu ohi (ma ọ bụ ha na-enyere ndị ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ahịa ha aka izu ohi). Ndị ọrụ ahụ kwuru na emebila ikike nchekwa data ha na ikike nke nzuzo site na iji ndekọ nzuzo.
Courtslọ ikpe ndị Spain megidere ma kwuo na njedebe ndị ahụ ziri ezi dịka ekwadoro maka inyocha ihe nzuzo. Ndi ECHR ekwenyeghi ma kwuo na thelọ ikpe Spanish enwebeghị ihe ịga nke ọma iji gosipụta ikike ziri ezi n'etiti ikike ndị ọrụ nke ọrụ nzuzo na ikike onye were ya n'ọrụ iji chebe ahịa ya - ha agwaghị ndị ọrụ banyere nwụnye igwefoto zoro ezo, a hụkwara ndị ọrụ niile. na-enweghị njedebe oge.
ECHR chere na nchedo nzuzo ahụ bụ ihe na - egbochi onwe ha na ndụ ha, ebe ọ bụ na ndị na - enye ego enweghị ike zere ịbụ ndị a na-ese n'ihi na ọ dị mkpa ka ha gaa na-arụ ọrụ. Ndi ECHR kwuru na iji rube isi n'iwu nche data ndị ọrụ a ga-agwarịrị, kọwapụta ma kpachara anya banyere nleba anya na ebumnuche nke nyocha. Agaghị eme ihe gbasara nyocha ma ọ bụrụ na enweghị nkwenye nke onye ọrụ.
Ọ bụrụ n’ịrụ ọrụ ma chọọ ngwaọrụ dị mma maka ileba anya ndị ọrụ gị ị nwere ike irite uru na ngwaahịa anyị dị elu. Maka ngwaahịa anyị dị elu pịa ebe a.
Nzuzo 6928 2 Echiche Taa